Vakaburitswa muAfghanistan vakagamuchirwa muUganda: Nei mahotera achifara?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Vakaburitswa muAfghanistan vakagamuchirwa muUganda: Nei mahotera achifara?
Afghanistan Kuputsa Nhau • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Vakaburitswa muAfghanistan vakagamuchirwa muUganda
Hurumende yeUganda yanhasi mangwanani, Nyamavhuvhu 25, 2021, yatambira makumi mashanu nevashanu evapoteri vanosvika zviuru zviviri zvevapoteri vanobva kuAfghanistan avo vasvika nendege yakazvimiririra kuEntebbe International Airport.
Mahotera muEntebbe ari kutarisira mhepo kubva kunzvimbo dzekuchengetera kubvira nhanho dzekugara dzakanyudzwa zvichitevera denda reCOVID-19 muna2020.
Vakaburitswa vakavhenekwa kuchengetedzwa pamwe nekumanikidzwa kweECVID-19 kuyedza uye inodiwa yekuisa wega maitiro.
Vakabudiswa muUganda vakarongerwa kufamba nendege vakatadza kusvika nekuda kwedambudziko rekuwana airport kuKabul.
Izvi zvinotevera chikumbiro kubva kuHurumende yeUS uye kugamuchirwa neHurumende yeUganda kuti vagare kwenguva pfupi maAfghan Nationals ari kuenda kuUnited States of America nedzimwe nzvimbo pasi rese zvichitevera kutora hurumende yeAfghan neTaliban.
Chirevo kubva kubazi rezvekunze muKampala chinoverengwa muchikamu.
"Uganda neUnited States vanodyidzana kwenguva refu uye kudyidzana kwenyika mbiri idzo dzakamboitika uye dziri kuramba dzichiita zvido zvakafanana mukubatsirana kwenyika mbiri idzi. Sarudzo yekugamuchira avo vanoshaya inoziviswa neHurumende yeUganda nezvezvinhu zvine chekuita nenyika dzese. ”
Kuzadzikisa chiratidzo cheHurumende yeUganda, Embassy yeUS kuUganda tweeted: "Vanhu vekuUganda vane tsika yakareba yekugamuchira vapoteri nedzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro. Sezvo ari mutsigiri mukuru wenyika mbiri dzevapoteri muUganda nenharaunda dzavanopinda muUganda, United States inoratidza kutenda kwayo kuvanhu veUganda. Hurumende yeUganda yakaratidza zvakare chido chekutamba chikamu chayo munyaya dzekunetseka kwenyika. Tinorumbidza kuyedza kwaro uye nemasangano emuno neepasi rose kuUganda… ”
Vakaburitswa, avo vanosanganisira varume, vakadzi, uye vana, vakaitwa kuongororwa kwakakodzera kwekuchengetedzwa pamwe nekumisikidzwa kweCOVID-19 kuyedzwa uye nenzira dzinodiwa dzekuisa wega.
Vakabudiswa muUganda avo vaifanirwa kufamba nendege vakatadza kusvika nekuda kwedambudziko rekuwana airport kuKabul.
Vasati vasvika, Gurukota rinowona nezvekunze muUganda, Gen. Jeje Odongo paakabvunzwa kuti ndiani achazovabhadharira mari yekuchengeta hurukuro yavakaita paterevhizheni naLarry Madowoon, CNN, vaitaura izvi, "Tinoziva kutambura kwevapoteri, uye nyika munharaunda yemarudzi, isu tine mutoro kunharaunda yepasi rose, uye zviratidziro zvedu nekukurukurirana kusvika pari zvino zvinoratidza kuti America ichatora mutoro. ”
Mahotera eEntebbe ari kutarisira kunaya kwemhepo kubva kunzvimbo dzekuchengetera kubvira nzvimbo dzekugara dzakanyikwa zvichitevera denda re COVID-19 muna 2020. Carol Natkunda, muridzi weAskay Hotel Entebbe, akataura tarisiro yekuti hotera yake ichagamuchira vaenzi ava vakasimbisa eTurboNews kuti vakagara vakaisa ese anodikanwa Maitiro Ekushanda Maitiro munzvimbo kubva kutanga kwedenda.
Uganda yakashanduka kubva pakuva sosi yekuenda kunogarwa nenhamba huru kwazvo yevapoteri muAfrica - kusvika 1.5 miriyoni - kunyanya kubva kuSouth Sudan, Democratic Republic of the Congo (DRC), Burundi, neSomalia.
Mukurwisana nehutongi hwehutongerwe enyika muSouth Africa muna 1989, Hurumende yeUganda yakapa hwaro hwevatapwa vekuSouth Africa vakagadzira nzvimbo yekugara varwi verusununguko (Umkonto we Sizwe) weAfrican National Congress (ANC). Vane gumi nemana evarwi vacho vanoramba vachiongororwa pachikoro chanhasi chaOliver Reginald Tambo ANC Hutungamiri, Kaweweta.
Kubva kuHondo Yenyika II apo veGerman Blitzkrieg vakatora nzvimbo zhinji dzeEurope, zviuru zvinomwe zvePoland - zvikuru vakadzi nevapoteri vevana - vakamanikidzwa kunopotera kuNyabyeya mudunhu reMasindi neKoja (Mpunge) mudunhu reMukono mune yainzi British Protectorate ye Uganda. Hazvisi zvisingazivikanwe kupupurira hama dzavo dzepamoyo uye vazukuru vachipa ruremekedzo kumakuva ehama dzavo dzakavigwa kuUganda.